တရုတ် Changzhou Long မော်တော် - ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို stepper မော်တာကိုသုံးနိုင်သည်
Stepper မော်တာထိန်းချုပ်တဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို၏ရာထူး, အမြန်နှုန်းနှင့် torque ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒါဟာလျှပ်စစ်မော်တာ၏ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာအလိုအလျောက်ဂီယာနှင့်လက်စွဲစာအုပ်အင်ဂျင်စတင်နှင့်ရပ်တန့်ဘို့နှင့်မြန်နှုန်း၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်စေ select လုပ်ပါသို့မဟုတ် Overload နှင့်အမှားဆန့်ကျင်လည်ပတ် reverse, နှင့် torque ကိုထိန်းညှိဖို့မျှော်မှန်းထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလျှပ်စစ်မော်တာကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များရှိပြီးသောစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မော်တာထိန်းချုပ်မှုနင်းလည်းပိုကြီးတဲ့မော်တာ Overload ရှိသည်သို့မဟုတ်လက်ရှိအခွအေနေကိုကျော်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါကတစ်ဦး Overload relay ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အပူချိန် sensing relay ကိုအတူပြုမိသည်။ ဖျူးနှင့်ဆားကစ်အနိုင်အထက်လည်းလက်ရှိကျော်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အသုံးဝင်ပါသည်။ အလိုအလျောက်မော်တာယာဉ်မောင်းစက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကန့်သတ် switches များနှင့်အတူထောက်ပံ့နေကြသည်။
တချို့ကရှုပ်ထွေးမော်တာနဲ့ controller ချိတ်ဆက်အမြန်နှုန်းနှင့်လိမ်အားမော်တာကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ တံခါးပိတ်-ကွင်းဆက်ထိန်းချုပ်တဲ့ controller ကိုတစ်ခုံ-အုပ်ချုပ်အပေါ်အင်ဂျင်အရေအတွက်တိကျ positioning ကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အဆိုပါမော်တာ controller ကိုတိကျစွာ Pre-programs ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင် အခြေခံ. ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုအနေအထား။ ဒါဟာအစ tool ကို၏အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီရန်ကွဲပြားခြားနားသောဝန်အခြေအနေများနှင့်နှောင့်အယှက်တပ်ဖွဲ့တွေများအတွက်အစားထိုးချေ။
မော်တော်နဲ့ controller သူတို့လုပ်ဖို့ကျန်ကြွင်းစေပြီအရာပေါ်အခြေခံထားပါတယ်။ လက်စွဲမော်တာထိန်းချုပ်မှု, အော်တိုမော်တာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အကွာအဝေးမှာမော်တာထိန်းချုပ်ရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. မော်တာထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုသာစတင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်နိုင်ပါ။ သို့သော်အများအပြား features တွေနဲ့အင်ဂျင်ကိုထိန်းချုပ်အများအပြားယာဉ်မောင်းရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်မော်တာထိန်းချုပ်မောင်းနှင်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ထားခံရဖို့မော်တာအမျိုးအစားအညီခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ဒါကလက်ရှိသို့မဟုတ် AC အကလက်ရှိသို့မဟုတ် DC ကဖြီးသို့မဟုတ် brushless DC ကအမြဲတမ်းသံလိုက်ပြောင်းရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှု servo, ခြေလှမ်းမော်တာဖြစ်ပါသည်။
အချိန် post: နိုင်ပါစေ-29-2018